Fanendahana laser vita amin'ny lamba fanavakavahana vita amin'ny pirinty vita pirinty - volamena Laser
Fanapahana Laser vita amin'ny milina namindrana
Fampiharana milina CO2 Laser ho an'ny sehatra tsy metaly
Fanendahana laser vita amin'ny lamba fanavakavahana vita amin'ny pirinty
Teknolojia vita pirinty ankehitriny dia ampiasaina be amina indostria isan-karazany toy ny fanatanjahan-tena, akanjo fitondra milomano, akanjo, faneva, saina ary faneva malefaka. Ny dingana vita amin'ny fanaovana pirinty famokarana ambony kokoa dia mitaky vahaolana haingana kokoa. Inona no vahaolana tsara indrindra hanapaka ny lamba vita amin'ny lamba sy vita amin'ny lamba? Ny fikajiana amin'ny fomba nentim-paharazana na ny fanodinana mekanika dia misy fetrany marobe. Ny fanendahana laser dia nanjary vahaolana malaza indrindra amin'ny fanilihana ny lamba vita amin'ny menina fanontana.
Vahaolana Laser Cutting Solution
Ny vahaolana dia manafoana ny fizotran'ny fanaingoana ny loko vita amin'ny pirinty vita pirinty vita amin'ny lamba na lamba, haingana sy marina, fanonerana an-tsakany sy an-davany izay mety hitranga amin'ny lamba tsy miovaova na matevina.
Mamoaka ny lamba ny fakan-tsary, mamantatra ary manaiky ny takelaka natao pirinty, na alao ny marika fisoratana anarana vita pirinty ary avy eo ny masinina laser dia nanapaka ny endrika voafantina. Ny fizotra rehetra dia mandeha ho azy tanteraka.
SISTEM LISY VISION LASER NANONTOLO INDRINDRA MAMPIASA INDRINDRA
Ity rafitra fijerena fahaiza-manao ity dia manana fahaiza-manao haingana hamaka haingana ny lamba vita pirinty teo am-pandriana tapaka ary mamorona vektor tapaka. Tsy mila mamorona volavola voapaika fotsiny, alefaso fotsiny ny volavola mitovy habe amin'ny fandaharana rehetra ary amboary tsara ireo faneva sora-baventy, saina na singa amin'ny akanjo misy tombony vita fehezina.
Marika fisoratana anarana
Ny rafi-pitondrana fakantsary dia ampiasaina hamantarana ireo marika fisoratana anarana vita pirinty. Ny marika dia azo vakiana tsara amin'ny alàlan'ny rafitra laser antsika ary ny toerany, ny habeny ary ny fanovana ireo fitaovana vita pirinty dia hovaliana noho ny fanadihadian'ny saina momba ireo marika fisoratana anarana.
Fampiharana ny milina vita amin'ny Laser Cutting Sublimation vita pirinty
Fanatanjahan-tena sy akanjo vita amin'ny kiraro, vita an-tongotra, lamba vita amin'ny trano
Ny rafitra fiadiana amin'ny Laser Cutting dia mety amin'ny fanapahana ny fanatanjahan-tena amin'ny fanatanjahantena manokana noho ny fahafahany manapaka fitaovana matevina sy mora ampiasaina - mitovy amin'ny karazana akanjo fanaovana fanatanjahantena (ohatra fitafy bisikileta, kitapo / palitao, akanjo entina milomano, legging, akanjo mavitrika sns).
Sora-baventy kely, taratasy, isa ary zavatra vita pirinty mazava
Ny mpanendaka laser dia mampiasa marika fisoratana anarana, ary ny lozisialy GoldenCAM ao anaty cutter laser dia manana fiasa fanavakavahana miovaova, izay mety hahafantatra ny drafitra mifanipaka amin'ny fitaovana famongorana ny fandokoana.
Sora-baventy, saina, sary lehibe ary faneva malefaka
Ity vahaolana fampiatoana laser ity dia natao manokana ho an'ny indostrian'ny pirinty nomerika. Izy io dia manome fahaiza-manao tsy manam-paharoa amin'ny famandrihana endrika endrika misy pirinty vita pirinty na horonan-tsary vita amin'ny dye-sublimated sy sary malefaka miaraka amin'ny sakan'ny fanapahana vita amin'ny halavany sy halavany.
KOTRAKA MAVITRIKA MAVITRIKA NY FIVORIANA DYE FAMPISORANA FAMPIASANA SY FAMPIARAHANA TEXTILES
Fahitana mikasa milina fanapaka laser
Masinina fahitana indroa milina fanapahana laser
Mamatsy milina fanoratana milina fanontana fakan-tsary
Mamatotra milina fanendahana Laser lehibe ho an'ny marika malefaka